Manchester United Oo Qiimo Culus Duldhigtay Xidiga Amaahda Ku Jooga West Ham Lingard.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Manchester united oo qiimo culus duldhigtay xidiga amaahda ku jooga west ham...
Red Devils ayaa qarka u saaran inay lacag ku shubaan sarakicidda amaahda ee West Ham Manchester United ayaa doonaysa inay si buuxda uga faa’iideysato rabitaanka West Ham ee ah inay iibsato Jesse Lingard xagaagan isla markaana ay 30 milyan oo ginni ($ 41m) ku qiimeyso weeraryahanka, sida laga soo xigtay Mirror.
Lingard wuxuu ahaa mid aan caadi aheyn tan iyo markii uu ku soo biiray Hammers bishii Janaayo, isagoo dhaliyay lix gool isla markaana sameeyay seddex caawin sideed kulan oo Premier League ah.
Man united ayaa dareensan in kooxda west ham ay ka heshay waxqabadka xidiga reer england iyadoo damacsan in lacag fiican ay ka hesho suuqa xagaaga si iyagana ugu soo qaataan xidigo cusub.
Previous articleXagee ayeey marayaan wadahadaladii u dhaxeeyay barcelona iyo Eric Garcia.
Next articleLeonardo oo soo bandhigaya Heshiis Cusub oo ku aadan Neymar, iyo Kylian Mbappe